China Cycling Izindondo ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Inkanyezi yendondo yebhayisikili yokugibela ibhayisikili nephethini ezungezayo, egcwele 1″ idiski yesikhungo sebhayisikili lezintaba. Ilinganisa u-50mm ububanzi futhi iza neluphu yokunamathisela amaribhoni endondo. Ifanele ukuqoshwa komuntu siqu emuva kwendondo..
IZIndondo zitholakala ngosayizi abahlukahlukene, ukusuka ku-1 1/4" ukuya ku-3" ububanzi.
Abaningi banombala noma igolide, isiliva noma ithusi.
Imedali yebhayisikili yethusi kanye nephethini ezungezayo, Ngendandatho yokuxhuma iribhoni yendondo.
Ukuqoshwa komuntu siqu ngemuva kwendondo.
Itholakala ngegolide lakudala, isiliva noma ithusi (ithusi), lezi zindondo zibonisa imininingwane emihle ezungezwe izinkanyezi eziyinkimbinkimbi enikeza le ndondo edumile ukubukeka okuyingqayizivele nokunemininingwane.
Into ngayinye ipakishwa ezikhwameni zepulasitiki ukuze ivikeleke
Njengazo zonke izindondo zethu, IZIndondo zethu zenziwe ngengxubevange yensimbi yangempela esikhundleni sepulasitiki.Indondo ngayinye iyikhwalithi ephezulu nombala ogqamile.Uma udinga ukwenza ngokwezifiso ilogo, singakuklama futhi, sineqembu elichwepheshile kakhulu abaklami
Okwedlule: UKUPHEKA IZIndondo
Olandelayo: IZIndondo zomdanso